ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ?घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिकबाट छुटकारा |
ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ?घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिकबाट छुटकारा
November 23, 2021 November 23, 2021 adminLeaveaComment on ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ?घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिकबाट छुटकारा
१. बेसारको पात बेसारको पातलाई सबैभन्दा राम्रो ग्यास्ट्रिकको औषधिको रुपमा मानिन्छ । दिनको एक ग्लास दुधमा चप गरेको बेसारको पात मिसाउनु र दिनहुँ पिउनुहोस् । यसो गर्दा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुँदै जानेछ ।२. अम्बाको पात एउटा अम्बाको पात लिनुहोस् र त्यसलाई पानीमा उमाल्नुहोस् । यसलाई दिनहँ पिउँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुँदै जानेछ ।३. आलुको जुस आलुलाई सफा गर्नुहोस् र त्यसपछि बोक्रा हटाई चप गरेर पानीमा उमाल्नुस् । दिनकै एक ग्लास ३ पटक खाना अघि पिउनुहोस् ।
४. अदुवा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम गर्ने अर्को तरिका अदुवा हो । अदुवालाई औषधिको रुपमा पनि मानिन्छ । दिनहुँ खाना खाएपछि ताजा अदुवाको टुक्रा चपाउनुहोस् यो समस्या आफैँ टाढा हुन्छ । यसरी अदुवाको धूलो, नुन, हिंग पानीमा मिसाउनु र दिनहुँ पिउने गर्नुहोस् ।५. बेकिङ सोडा बेकिङ सोडामा धेरै मात्रामा ब्लतबअष्म भएको कारण यसले ग्यास्ट्रिकको समस्या हटाउन मदत गर्दछ । एक ग्लासमा आधा चम्चा बेकिङ सोडा राखेर मिसाउनुस् र दिनहुँ यसको प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् ।
६. दालचिनी तातेको दूधमा आधा चम्चा दालचिनी को धूलो, मह अलिकति राखेर मिसाउने र यसको सेवन राती सुत्नु अगाडि गर्नु । यसले ग्यास्ट्रिकको समस्या कम गर्न मदत गर्दछ ।७. हिंग हिंगमा पानी मिसाइ यसको पेस्ट बनाउनु र यसलाई पेटमा राखी केही समय राख्नु । यस्तो गर्दा यो समस्या हट्दै जान्छ ।८. जिरा बिउ एक ग्लास तातो पानीमा एक चम्चा जिरा बिउ राखेर उमाल्ने र केही समय सम्म यसलाई ढाकेर राख्ने र त्यसपछि यसको सेवन गर्नुहोस् ।
९. लसुन २.३ वटा लसुनलाई आगोमा पोल्नुस् त्यसपछि त्यसको बोक्रा निकालेर खानुहोस् । ताजा लसुनलाई पिसनु, जिराको धूलो, जिराको गेडालाई पानीमा राखी उमाल्नु र यसको सेवन गर्नु ।१०. सुप सौंप पनि एक प्रकारको औषधिकै रुपमा लिन सकिन्छ । पानीमा सौंपको दाना राखी उमाल्नस् र सेलाए पछि खानुहोस् ।११.पुदिना एक ग्लास पानीमा ताजा पुदिना राखेर उमाल्ने र सेलाएपछि त्यसमा मह हालेर दिनको दुई र तीन पटक खानुहोस् । यसले ग्यास्ट्रिक समस्यालाई हटाउन मदत गर्दछ ।
यी युवतीहरु हुन्छन् हद भन्दा बढी भाग्यमानी
यौ*नको पावर तुरुन्तै अत्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी
यस्ता संकेत देखिए भने हुनसक्छ ‘ब्लड क्यान्सर’,यी लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता